I-China DOSLY Gamepad Controller ye-PS4, i-Wireless PS4 Controller iyahambelana ne-PS4 / Slim / Pro (Mnyama) ifektri kunye nabavelisi |Mcldosly
I-DOSLY Gamepad Controller ye-PS4, i-Wireless PS4 Controller iyahambelana ne-PS4 / Slim / Pro (Mnyama)
1. VUMELA UYILO UMXHOLO WEQELA LESITHATHU UMLAWULI ONGANGENAMNGANI: Lo ngomnye umntu othatha indawo yakhe hayi umlawuli osemthethweni, Umlawuli omnyama we-halloween we-ps4 uxhasa imidlalo edumileyo.Iyahambelana nazo zonke iinkqubo zeWindows ezifana noWin 7/8/9/10/XP/Vista, njl.
I-2.I-HIGH-FIIDELITY WIRELESS AUDIO KUNYE NE-UPRADE kwi-1000mAh UBOMI BEBHATHERI: I-accelerometer edibeneyo kunye ne-gyroscope ine-sensitivity ephezulu, ekhululekile ukubamba ixesha elide.Okwangoku, isilawuli se-ps4 esingenazingcingo sifuna kuphela iiyure ezi-2.5 zexesha lokutshaja ukuya kuthi ga kwiiyure ezili-10 zexesha lokudlala.
3.AMAVA OMKHULU WOKUGQIBELA UMDLALO: Umlawuli omtsha we-PS4 weLip Prints Black wongeza i-3.5 mm ye-audio port, izithethi ezakhelwe ngaphakathi ezihlala ngaphakathi komlawuli, isetyenziswe ngokuyinhloko njengendlela yokunyusa ukucwiliswa komdlali ngaphandle kokuphazamisa intsapho yakho okanye umntu ohlala naye. .
4.BETTER MATERIAL FOR AMAQHOSHA KUNYE NEJOYSTICKS ZINIKELA UBUCHULE BOKUDLALA INKONZO: Emva kovavanyo olungqongqo, amaqhosha kunye ne-ps4 joysticks zingasetyenziswa ukuya kuthi ga kwisigidi esinye.Isilawuli sokudlala esingenazingcingo se-ps4 siyilwe ngokwe-ergonomically nge-asymmetric joystick, enokuphelisa ngokufanelekileyo ukudinwa kwemisipha ekudibaneni kwesithupha sakho.
5.ISIPHO ESIMANGALISAYO KUBAHLOBO BAKHO KUNYE NABANTWANA: Isilawuli esingenazingcingo se-ps4 sinokuba sisipho esihle sosuku lokuzalwa lomhlobo kunye nawuphi na umnyhadala, onjengeHalloween, uMbulelo, iKrisimesi.
FOB Ixabiso:US $0.5 - 9,999 / Iqhekeza
Min.Ubungakanani boMyalelo:I-100 iqhekeza / amaqhekeza
Ubunakho bokubonelela:10000 Iqhekeza/Amaqhekeza ngenyanga
Ukudibanisa njani kwiP4/P4 Pro/PC(Win7/8/8.1/10)?
I-P4: Qhagamshela isilawuli kwi-console ye-P4 ngentambo ye-USB xa isilawuli sicimile.Isibane sokutshaja esityheli sikhanyise uze ucinezele kwaye ubambe "iqhosha le-P4" ukubhangqa.
I-PC:(1)Qhagamshela isilawuli kwiPC USB cable kwaye isetyenziswe njengomlawuli oneengcingo.
(2)Qhagamshela isilawuli kwi-Notebook ngokusebenzisa iqhosha lokwabelana kunye neqhosha le-PS.
Phucula iiLayouts eziguquguqukayo ngendlela emangalisayo, enika abadlali amandla okwenza izinto ezinje ngokudlala ngeentambo okanye ngaphandle kwamacingo, izinti ze-analog eziguquliweyo zivumela ukuchaneka okungenakulinganiswa nayo yonke intshukumo. Isilawuli se-gamepad se-D-padP4 esiPhakamileyo senziwe ngokugqibeleleyo ngamava akho okudlala abalaseleyo.Uyilo oluphuculweyo lweqhosha kunye novakalelo oluphezulu lwentonga ezimbini ze-analog kunokuphucula ukuchaneka kwamaxesha abalulekileyo, kwaye wenze lula umdlalo ngelixa unciphisa ixesha lokuphendula. I-D-pad ephezulu echanekileyoUbume kunye novakalelo lwe-trigger luphuculwe ukuze lusebenze ngcono, luzisa into oyifunayo kumdlalo wakho.
YABELANA Iqhosha leqhosha lenza unxibelelwano lwentlalo lube lula ngevidiyo yomdlalo odlalwa ngoko nangoko kunye nokulayishwa kwesikrini I-Sensitive Touch PadTouch pad exhasa i-touch-touch emininzi ivula amathuba okudlala okutsha, umlawuli weprimiyamu yokudlala kufuneka ube nabadlali bokwenyani. I-Dual.shock FeedbackUmlawuli unokukunika ingxelo yokungcangcazela kwangethuba xa umdlalo udibana nohlaselo kunye nokungqubana ngenxa yeemotor ezi-2 ezakhelwe ngaphakathi.
Ngaphambili: I-DOSLY PS4 isilawuli esingenazingcingo siyahambelana nePS-4/Pro/Slim/PC,enomdlalo wokungcangcazela kabini kude-1000mAh
Okulandelayo: Isilawuli esingenacingo sePS4, indawo yoMlawuli wePS4 kunye neBattery eyakhelweyo eyi-1000mAh eTshajwayo kwakhona (yeGolide)
into entsha yomdlalo
I-DOSLY PS4 isilawuli esingenazingcingo siCompater...
Isilawuli V2 Wireless Bluetooth nge USB Cable...
Isilawuli esingenazingcingo seDOSLY siyahambelana nePS 4/...
Umlawuli weJoypad uyahambelana noTshintsho, iJoyco...
Tshintshela isiLawuli endaweni yeNintendo Swit...